Golf Director, Stephen Chick ထံမှအမှာစကား
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြောလိုတာကတော့ ဒီစာစောင်လေးကို ဖတ်ရှုနေကြသူတွေအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး covid ပိုးတွေ့မှုတွေ့များပြားလာတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာ အစိုးရက ချမှတ်ထားတဲ့ တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာကြရင်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုရောက်ဖို့အတွက် အတူတူရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းကို lockdown မပြုလုပ်ခင် Golf Academy နှင့် Pro Shop ကို ပြင်ဆင်နေမှုတွေကတော့ ပြည့်စုံလုနီးနီးရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ၂၄ ရက်နေ့ကစပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ရပ်နားထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ခေတ္တခဏရပ်ဆိုင်းမှုပြုလုပ်ထားရပါတယ်။ အရည်အသွေးပြည့်မှီတဲ့ facilities တွေကို မကြာမီအချိန်တွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကတော့ ခိုင်ခိုင်မာမာကိုရှိနေဆဲပါ။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ယခင်လတွေက ဖော်ပြခဲ့တဲ့စာစောင်မှာ အဖွဲ့ဝင်အသစ်ရောက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒီလမှာတော့ PGA Teaching Professional Mr. Phil Moore က အချိန်တော်တော်ကြာအောင်နိုင်ငံထဲဝင်ဖို့စောင့်လိုက်ရပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အသိပေးလိုပါတယ်။ Phil က အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းဇာတိသားဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်တော်တော်များများကိုလည်း ထိုဒေသမှာပဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာလည်း ၂ နှစ်လောက် ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ ဂေါက်ကစားတာကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ရင်း နေလာခဲ့တာကြောင့် မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နွေရာသီကို အလွယ်တကူနေသားတကျဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Phil ဟာ Junior Golfers တွေကို တိုးတက်အောင်သင်ကြားပြသပေးရတဲ့ နေရာမှာ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပြီး အတွေ့အကြုံလည်းရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂေါက်ကလပ်ကနေ ဘယ်လိုအစီအစဥ်သစ်တွေကြေညာသွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်မျှော်ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ လူကြီးပိုင်းကစားသမားတွေအတွက်လည်း ပျော်စရာလေ့လာသင်ကြားနိုင်တဲ့ အစီအစဥ်လေးတွေထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်မံပြီးတော့ lockdown ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာ ကောင်းသတင်းလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုဇော်မင်းနှင့် အဖွဲ့ က အိမ်ရာထဲမှာလာရောက်နေထိုင်ပြီး လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အလုပ်တော်တော်များကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်သွားတာက
လာမဲ့နွေရာသီအတွက် အလွန်အကျိုးရှိပြီး တနှစ် ၂ ကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု ကို အောက်တိုဘာလမှာ ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဂေါက်ကလပ်ကို ယာယီပိတ်ရမှာကိုလည်း စက်တင်ဘာလအကုန်ထဲကလုပ်ဆောင်လို့ပြီးသွားတာမလို့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဂေါက်ကလပ်ပြန်လည်မဖွင့်မှီအထိ ကျန်းမာဘေးကင်းစွာနေထိုင်ကြဖို့ပြောကြားလိုပါတယ်။
ပန်းလှိုင် Golf Academy မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Phil Moore ကို ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူတူ ကြိုဆိုလိုက်ရအောင်။
ဒီနှစ်မိုးရာသီကတော့ အရင်နှစ်တွေတုန်းကလောက် မိုးမများတဲ့အတွက် နည်းနည်းသက်ညှာမှုရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိုးရွာလို့ရလာတဲ့ ရေတွေက နေရောင်ခြည်နဲ့ရောသွားတာဟာ မြင်ခင်းပြင်အတွက် အင်မတန်ပဲ အရေးပါပါတယ်။ UV အနည်းငယ်လောက် မြက်ခင်းပြင်ထဲကိုဝင်သွားတာကတင် ကြီးထွားရှင်သန်ရေးအပိုင်းမှာ အများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်။
အခုလိုမျိုးခေတ္တပိတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာ ဂေါက်ကွင်းအဖွဲ့သားတွေက ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိသွားပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းမျိုးကို ဂေါက်ကလပ်ဖွင့်ထားချိန် ဂေါက်ရိုက်သမားတွေနဲ့ဆိုရင် ပြီးမြောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်ပြီး ရက်သတ္တပတ်တော်တော်ကြာနိုင်တာမို့ ပြင်ဆင်ဆဲလုပ်ငန်းတွေဟာ လူတော်တော်များများကို စိတ်ရှုပ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ ပြီးစီးအောင်ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကတော့ မြက်ခင်းစိမ်းတွေကို 12mm အပ်အချွန်တွေကို အသုံးပြုပြီး ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ မြေကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုထည့်ပြီး အပေါ်ကမှ အကောင်းဆုံးသော သဲတွေနဲ့အုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြက်ခင်းပြင်တွေကိုပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ collars နဲ့ apronsတွေကို 4mm အနေအထားရအောင် ဒေါင်လိုက်ညှပ်တာတွေ ကိုလည်း ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါက မကောင်းတဲ့မြက်ခင်းအပိုင်း (thatch) တွေ မတန်တဆကြီးထွားလာကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးဖယ်ရှားမှုပြုလုပ်လဲဆိုတာကို အောက်ဖော်ပြပါပုံမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဆောင်တာက ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင် ဆံပင်ညှပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဆံပင်ညှပ်ဆရာကနည်းနည်းလေးလိုက်ပါးပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။
ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရေယိုစိမ့်မှုတွေနည်းအောင်ကူညီပေးပြီး ဘောလုံးကို ခုတ်တင်ပြီးရိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားနဲ့ရိုက်နိုင်အောင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရတာကတော့ tee-box တွေအကုန်လုံးမှာလည်း အလားတူလုပ်ငန်းစဥ်ကိုလုပ်ဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတကြိမ်မှာတော့ fairway mower အပိုင်းမှာလုပ်ဆောင်ရပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မကောင်းတော့တဲ့မြက်တွေက ထိုအပိုင်းမှာပိုများပြီး ပိုမိုအားကောင်းတဲ့စက်ကိုအသုံးပြုပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကြည့်မကောင်းတော့တဲ့ ‘torpedo grass weed’ တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းကအထိရောက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ထုတ်ကုန်အသစ်အချို့ကို စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဆောင်ပြီး အဖြေရှာရပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ကိုရရှိခဲ့တာမလို့ bunker မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ မညီညာတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကို ဆေးမှုတ်တာတွေ ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
‘torpedo weed’ ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ သူရဲ့အမြစ်က ၆‌ပေအထိရှည်လျားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မြေကြီးအနက်ပိုင်းအထိ ကြီးထွားရှင်သန်နိုင်တာမလို့ ဖယ်ရှားရတာလည်းအင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်။
ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်မြက်ခင်းများပြန်လည်အုပ်ခြင်းနှင့် အပေါက်များအတွင်းသို့သဲများစီးကျမှုရှိစေရန် drag mat ကို အသုံးပြုခြင်း
မြက်ခင်းပြင် collars နှင့် aprons များကို ဒေါင်လိုက်ကိုက်ဖြတ်မှုများပြုလုပ်နေခြင်း
လစဥ်ပြုလုပ်နေကြပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sparrows Fun Tournament မှာ ကျင်းနံပတ် ၃ ကို နံပတ် ၅ တုတ်ဖြင့် ကျင်းဝင်သွားတဲ့ Mr Jose Angeja ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်။
DIGAY မှ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ၅၃ ကြိမ်မြောက်အာဆီယံနှစ်ပတ်လည်နေ့ Golf Tournament မှာ par5ဖြစ်တဲ့ ကျင်းနံပတ် ၇ မှာ Albatross ကို ရရှိသွားတဲ့ ကိုစိုင်းကျော်ဝင်း ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်။
Sparrows society မှ လှူဒါန်းမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေမှုအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုဖော်ပြချင်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလနှင့်ဩဂုတ်လတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လစဥ်အပျော်တမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှ ရရှိတဲ့ မြန်မာကျပ် သန်း ၂၀ ကို မသန်စွမ်းကလေးဂေဟာသို့လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပြီး ပါဝင်သူအားလုံးကိုချီးကျူးပါတယ်။
Mr. Eddy Herbert
U Ah Wai @ Li Ton Wai
U Sit Thway Aung
U Yang Ho
U Sann Oo Hlaing
U Maung Maung Htwe
Mr. Li Jifeng
Mr. Fang Wei Biao
Mr. Kong Xi Zhong
Mr. Jin Wen Zhi
Mr. Wang Wei Jie
Mr. Wang Yong Bing
Mr. Zhang Anwei
Mr. Wu Caide
Mr. Li Sulong
Mr. Qi Mafei
Mr. Haessig Shiraz Herbert
Mr. Haessig Jules Miguel
Mr. Dean Cleland
U Sit Taing Aung
Col. Edward Robert Evans
U Tun Naing @ Mr. Lin Kawen
Daw Hla Hla Mu
U Pyae Sone
Daw Zinmar Win
U Lwin Moe
Ma Thida Htut
Mr. Sasaki Tatsuya
Mr. Vedant Daga
Ma Phyu Phyu San
Pro’s Top Tip!
“ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီလအတွက်ပေးချင်တဲ့ ပထမဆုံးအကြံကတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဂေါက်ရိုက်တာကို ဘယ်လိုသင်ကြားပြသလဲဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာကစလုပ်ရမလဲဆိုတာထက် ဂေါက်ရိုက်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရိုက်ချက်ပုံစံကိုပြောချင်ပါတယ်။ Greenside Bunker ပေါ်မှာရိုက်ရတာကို
အကြိုက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလွယ်ကူတဲ့အကြံပေးချက်လေးက bunker game တွေကစားတဲ့အခါမှာ အကူအညီဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အားလုံးနဲ့မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာတွေ့ဆုံဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်။” - Phil Moore
Bunker မှာရှိတဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့နဲ့ ညင်သာစွာကျတဲ့ ခပ်မြင့်မြင့် bunker ရိုက်ချက်ကို ရိုက်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ :
၁. club face ကို address ဆီဦးတည်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်လက်ကိုင်ကို မြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် club head ကမြေကြီးထဲသို့ အရမ်းကြီးနစ်ဝင်သွားတာမျိုးတွေကိုမဖြစ်စေတော့ပဲ ‘bounce’ ဖြစ်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (the ‘sole’ of the club က မြေကြီးပေါ် စိုက်ဝင်သွားတာကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်)
၂. set-up ပုံစံအနေအထားမှာဒူးကိုပိုကွေးပြီး ထိုင်တာက ဦးတည်ထားတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ဖို့ပိုမိုတည့်မတ်စေပြီး မြင့်မြင့်ရောက်အောင်လည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၃. ဂေါက်သီးအနေအထားကို သင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေဖနောင့်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာသို့ရွှေ့လိုက်ပါ။ (ဘယ်သန်များအနေနှင့်ညာဘက်ခြေဖနောင့်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ရွှေ့ပါ) ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် club head က ဂေါက်သီးထက် (၁-၂ လက်မလောက်) နောက်ကျပြီးမှဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်စေပြီး လက်ကိုင်ကလည်း သင့်ရဲ့ ခါးပတ်ခေါင်းဘက်သို့ပိုပြီးဦးတည်တဲ့ပုံဖြစ်စေတဲ့အတွက် နောက်ဘက်ပိုရောက်ပြီး အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ club ကစိုက်ဝင်သွားတဲ့အနေအထားမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၄. ၆၀/၇၀% ခန့် အလေးချိန်ကို ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ပိုပြီးအားစိုက်ပါ။ (ဘယ်သန်များမှာ ညာဘက်ခြမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်)
၅. နောက်ဆုံးအနေနဲ့သဲထဲသို့ဖြတ်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုထားပါ။
Bunker ရိုက်နည်းပို့ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့သင်ပြမှုလိုအပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ပိုမိုရှင်းလင်းမှုလိုအပ်လျှင်ဖြစ်စေ philmoore@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းကြပါစေ။
Phil Moore - PGA Teaching Professional
အဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍ - မဇာခြည်တင်နှင့် ကျင်းပေါက် ၉ ကျင်းရိုက်ခြင်း
ဂေါက်ကလပ်မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာ ၁ နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီ။
၂. ဂေါက်ကိုစတင်ကစားဖို့ ဘယ်အရာက စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေတာလဲ?
မိသားစုကစတင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက အဖေနောက်လိုက်ပြီး သူကစားတာတွေကို ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ ကျွန်မအကိုက single handicap မလို့ သူအချိန်ရှိတဲ့ရက်တွေမှာ ကျွန်မကိုလေ့ကျင့်သင်ပြပေးတယ်။ ကျွန်မရဲ့အမျိုးသားကလည်း ဂေါက်ရိုက်ဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဂေါက်ကွင်းထဲမှာဂေါက်အတူတူရိုက်ပြီး အချိန်တွေကုန်ဆုံးရတာကို သဘောကျတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လုံးက စွန့်စားရတာကို ဝါသနာပါပြီး အပြင်သွားရတာကိုလည်းနှစ်သက်တယ်။ ကျွန်မက ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာမှုရှိနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်သူဖြစ်တာမလို့ ဂေါက်ကစားတာကလည်း ကျွန်မအတွက်အရေးပါပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရတဲ့မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ဂေါက်ကစားရင်းဖြေလျော့လေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ က လမ်းလျှောက်ရင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကိုလဲ ကြိုက်တယ်။ ဂေါက်ရိုက်တဲ့အခါ ဖက်ရှင်ကျတဲ့အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ရတာကလည်း ကျွန်မကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ ဂေါက်ရိုက်တယ်ဆိုတာက ဗျူဟာချပြီးလုပ်ဆောင်ရတဲ့ကစားနည်းဖြစ်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့အချီတချီရိုက်ပြီးရင် နောက်ထပ်ဆက်ရိုက်ဖို့ကို စိတ်အားထက်သန်နေတတ်တယ်။ နောက်ပြီး ဒီအားကစားက အလုပ်လုပ်သူအချင်းချင်း၊ စိတ်တူကိုယ်တူလူတွေ၊ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ ကစားနည်းပဲဖြစ်တယ်။ ကျွန်မရဲ့အပတ်စဥ်လုပ်နေကြအရာတစ်ခုဖြစ်လာတော့တာပဲ။
COVID-19 မဖြစ်ခင်ကတော့ တလကို ၁ ကြိမ် ၂ ကြိမ်လောက်ပဲ ကစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုအိမ်မှာနေရင်းအလုပ်လုပ်ကြရတဲ့အခါမှာတော့ တပတ်ကို ၃ ကြိမ်ကနေ ၅ ကြိမ်လောက်အထိ ကစားဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုအချိန်တိုးပြီးကစားလိုက်ထဲက ကစားရတာသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်။ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မအမျိုးသားက tee off ကို မနက် ၅:၃၀ မှာ စတင်ကစားပြီး ၉ကျင်းကို မနက် ၇:၃၀ လောက်မှာ ပြီးလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မက မနက်ပိုင်းမှာကျွန်မသမီး ၂ ယောက်နဲ့အတူ မနက်စာစားလေ့ရှိပြီး ၈ နာရီလောက်ဆို အလုပ်စလုပ်ဖြစ်တယ်။ မနက်စောစောဂေါက်ရိုက်တာက စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီး အလုပ်ရှုပ်မယ့်တစ်ရက်တာကိုဖြတ်သန်းဖို့အတွက် ခွန်အားဖြစ်စေတယ်။
The 4-Wood ကတော့ကျွန်မအကြိုက်ဆုံး ဂေါက်ကလပ်ပါပဲ။ အဲ့ဂေါက်ကလပ်မှာဆို တည်ငြိမ်တဲ့ရိုက်ချက်တွေကို ရိုက်နိုင်ပြီး ခပ်ဝေးဝေးရိုက်ချက်တွေကိုလည်း ရတယ်။
၅. ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကလပ်မှာ အကြိုက်ဆုံး caddie ရှိလား?
ကျွန်မမရွေးတတ်ဘူး။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကလပ်မှာရှိတဲ့ caddies အကုန်လုံးက နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းကြပါတယ်။ ကျွန်မကအကြိုက်ဆုံး caddie ဆိုပြီးဘိုကင်လုပ်လေ့တော့မရှိပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၉ ကျင်းပဲကစားဖြစ်တာများလို့ပါ။ နောက်ပြီးကျွန်မကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်အတောအတွင်း သူတို့တွေအလှည့်လွတ်သွားနိုင်တယ်။ lockdown ဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်း ကျွန်မအတွက် golf trainer မရှိတော့ မတူတဲ့ caddies တွေကိုတွေ့ရတာကို ပိုပြီးသဘောကျတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဆီက နည်းလမ်းအသစ်တွေကို သင်နိုင်လို့ပါ။ သူတို့ကကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နည်းပြသဘောမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့။
၆. အကြိုက်ဆုံးကျင်းပေါက်နံပတ်ရှိလား? ဘာကြောင့်လဲ?
ကျင်းပေါက် ၁၆ ကတော့ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှုခင်းလှတယ်၊ ပိုပြီးအစွမ်းပြရတယ် နောက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ အကောင်းဆုံးအမှတ်တွေကို အဲ့ကျင်းမှာရလေ့ရှိတယ်။
၇. နေဝင်ချိန်ရိုက်ရတာကြိုက်လား? နေထွက်ချိန်ရိုက်ရတာကြိုက်လား?
မနက်ပိုင်းပေါ့။ လေကပိုပြီးသန့်တယ်။ နောက်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာပိုပြီးအေးအေးလေးနဲ့နေလို့ကောင်းတယ်။
၈. ဂေါက်ရိုက်ပြီးရင် အကြိုက်ဆုံးစားစရာ(သို့မဟုတ်) သောက်စရာကဘာလဲ? Berry သီးဖျော်ရည်ပါ။ အဲ့တာက အရမ်းလန်းဆန်းစေပြီး အားပြန်ပြည့်စေပါတယ်။ တခြားသူတွေကိုလည်း စမ်းသောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ၉. ဂေါက်ကစားခြင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ရှိလား? ဂေါက်ကစားခြင်းက ကျွန်မအတွက်တော့ မိသားစုတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ အချိန်ကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ အပန်းဖြေကစားနည်းတခုပါ။ ကျွန်မအတွက် single handicap တစ်ယောက်အထိဖြစ်လာဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းပိုပြီးကျွမ်းကျင်လာချင်တယ်။ အဲ့ဒါမှလည်း ပိုပြီးကောင်းကောင်းကစားနိုင်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုလည်းပိုရမှာဖြစ်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ရိုက်ချက်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲကိုရိုက်ရတာကို ဘာနဲ့မှနှိုင်းယှဥ်လို့မရဘူး။ ဂေါက်ကစားနည်းက လေ့ကျင့်ရင်း၊ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းဗျူဟာတွေချရင်းတိုးတက်လာနိုင်တဲ့ကစားနည်းတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကစားပွဲများကို အခြေအနေတွေကောင်းတာနဲ့ ပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပြီး club Championship 2020 မတိုင်ခင်ပြီးဆုံးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
2020 Club Championships ကျင်းပမည့်ရက်များ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့နှင့် ၆ ရက်နေ့
ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းကောင်းများကို အချိန်ပြည့်ကျင့်သုံးပါ။ (ပိုးသတ်ပါ၊ တဦးနှင့်တဦးခပ်ခွာခွာနေပါ) ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းသတင်းများကိုသိရှိဖို့အတွက် Facebook & Instagram @punhlainggc တို့ကို follow လုပ်ထားပါ။
The Pun Hlaing Golf Club News July/August 2020